Umatshini wokutywina weValve yoFakelo china manufacturers & ababoneleli
Itywina leToyota yemoto yeToyota china manufacturer
Amatywina eempawu zemoto yeValve 90913-02060
Isixhobo: VITON, FKM
Ukupakisha: iiPC 8 ibhegi nganye
Izitampu zeNissan Viton zeZithuthi zeValve yeZitishi china manufacturer
I-Nissan Viton yeziQinisekiso zeValve yeZithuthi zeValve
I-Kia Pride Valve isiqu seempawu china manufacturer
I-Kia Pride Valve Stem Seals
Isixhobo: VITON kunye neNBR
Isicelo: Emva kwemarike kunye ne-OEM
ITywina leNissan Toyota Valve
Izitywina zevalve zizixhobo ezibonelela ngereyithi echaziweyo yemitha yeoyile kwisikhombisi se-valve stem yeenjini zangaphakathi zomlilo ukuthambisa isikhokelo sevalve kunye nokunciphisa uthumo lwenjini. Ukutywina kwe-valve stem kufumaneka kwiidizili nakwiinjini zepetroli kwaye ngaphandle kokunyusa.
I-GOS inikezela kuyilo olusezantsi lwe- "state-of-the-art" seval stem seals:
Iimpawu zePeugeot Valve Valve Seal Seal China Supplier
Izixhobo ze-PEUGEOT 405 206 VALVE SEAR zibonelela ngenqanaba lokulinganisa ioyile kwi-valve stem interface yeenjini zangaphakathi zomlilo ukuthambisa isikhokelo sevalve kunye nokunciphisa ukuthunyelwa kweinjini. Ukutywina kwe-valve stem kufumaneka kwiidizili nakwiinjini zepetroli kwaye ngaphandle kokunyusa.
Itywina elingadityaniswanga: lizalisekisa umsebenzi weoyile
Izithuthi ze-Isuzu Valve Stem Seal Oil Seal China Umthengisi
Izitywina zevalve zizixhobo ezibonelela ngereyithi echaziweyo yemitha yeoyile kwisikhombisi se-valve stem yeenjini zangaphakathi zomlilo ukuthambisa isikhokelo sevalve kunye nokunciphisa uthumo lwenjini. Amatywina e-valve ye-GOS ayafumaneka kwiidizili nakwiinjini zepetroli kunye nangaphandle kokunyusa.
Imoto kunye nesithuthuthu sokutywina isiqu sokutywina
Materail: FKM / VITON Ubushushu: -40 ～ + 250 ℃ Uxinzelelo: ngezantsi kwe-0.02MPA isantya sokujikeleza: ngezantsi kwe-10000rpm Valve stem seal luhlobo lwetywina leoyile, olwenziwa ngokubanzi ngokwenza ifreyimu yangaphandle kunye ne-fluororubber kunye. Intwasahlobo okanye intambo yentsimbi efakiweyo kufakelo lokuvula itywina leoyile lokutywina i-injini yesikhombisi sentonga. Itywina yeoyile yevalve inokuthintela ioyile ekungeneni kwimibhobho yokutya kunye neyokukhupha, ibangele ilahleko yeoyile, ithintele umxube wegesi wepetroli ...